Mambra masina kokoa
“Ary dia niray saina isan-andro izy ka nazoto nankeo an-kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po, nidera an'Andriamanitra sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olom-bonjena dia n'a nampin'ny Tompo isan'andro ho isan'ireo.”- Asa. 2:46,47
Izay fanahy rehetra tena niova fo marina dia haniry fatratra ny hitaona ny hafa avy ao amin'ny haizin'ny fahadisoan-kevitra ho amin'ny fahazavan'ny fahamarinan'i Jesôsy Kristy mahagaga. Tsy hirotsaka velively amin'ny fomba mivatravatra ny Fanahin' Andriamanitra izay manazava ny tany manontolo amin'ny voninahiny raha tsy mbola manana vahoaka nandray fahazavana, isika, vahoaka izay mahafantatra amin’ny alalan'ny fanandramana ny tena hevitry ny hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Rehefa manokan-tena manolontolo ho an'ny fanompoana an'i Kristy isika dia ho fantatr'Andriamanitra izany ka handrotsaka mivatravatra ny Fanahiny amin'ny fahafenoany Izy. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy mbola tonga mpiara-miasa amin'Andriamanitra aloha ny ampahany betsaka indrindra amin'ny fiangonana. Tsy afaka handrotsaka ny Fanahiny Andriamanitra raha mbola miharihary be loatra ny fitiavan-tena sy ny fampanaranam-po ny tena, ary raha mbola manjaka ny toe-tsaina toy izay hita taratra teo amin'ny valin-tenin'i Kaina manao hoe: "Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?" Gen. 4:9.
Raha tsy mbola ampy hanaitra ny hery marefon’ireo izay milaza azy ho mahalala ny marina ny fahamarinana ho an'izao andro izao, mbamin'ireo famantarana miseho lany etsy sy eroa izay manamafy ny fahantomoran'ny fihafaran'ny zavatra rehetra, dia handrakotra ireo fanahy ireo ny aizina izay mifamatra amin'ny fahazavana efa namirapiratra teo aminy. Tsy misy endrika fialan-tsiny azon'izy ireo entina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ilay andro fitsarana lehibe, ny amin'ny tsy firaihana nasehony. Tsy hanana antony azo atolotra izy momba ny tsy niainany sy nandehanany ary niasany araka ny fahazavan'ny fahamarinana masin'ny Tenin'Andriamanitra. Tokony ho nambarany tamin'ity tontolo nohamaizinin'ny fahotana ity mantsy, tamin'ny alalan'ny fitondran-tenany sy ny firaisam-pony ary ny fahavitrihany fa ny herin'ny filazantsara sy ny fahamarinany dia tsy misy isalasalana ny aminy.
Tsy ny mpitandrina ihany fa ny mambra laika koa, no tsy manao araka izay vitany amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny ohatra handresena lahatra ny olona hanaiky ilay fahasoavan'i Kristy mahavonjy. Amin'ny fahaizana sy tetika mahomby ary amin'ny fahendrena avy any ambony no tokony handreseny lahatra ny olona hibanjina ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. RH, 21Jolay 1896.